March 14, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 14th, 2017'
March 14, 2017 – Wasiiru-dowlaha Amniga Somaliland, Maxamed Muuse Diiriye ayaa soo saaray amar (Wareegto) uu ku xanibayo idil ahaan Shirarka Siyaasadda ee lagu qabanayo hoteelada magaalada Hargeysa ee looga hadlayo heshiiskii Imaaraadka iyo Somaliland ee Dekedda Berbera. Waxaana uu wasiirku si gaar ah u xusay inaan la qaban karin Shirar looga soo horjeedo Maalgashiga …
Heshiiska Somaliland iyo Imaaraadka (VIDEO)
Waxaana uu wasiirku si gaar ah u xusay inaan la qaban karin Shirar looga soo horjeedo Maalgashiga Mashaariicda Horumarinta iyo Heshiiska la xiriira Saldhigga Milliteri ee Imaaraadka Carabta ee magaalladda Berbera. Wasiirka waxa uu ku goodiyey inay gacan bir ah ku qaban doona dadka marti-geliya Shirarka aan la jaan-qaadi karin Siyaasadda Somaliland, mucaaradkana ku eedeeyay …
Sheekh Maxamed Shaakir oo Maanta Dib Ugu Laabtay Magaalada Dhuusa-mareeb
March 14, 2017 – Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta dib ugu laabtay Magaalada Dhuusa-mareeb, Isagoona ka warbixiyay socdaalkii uu ku tegay magaalada Muqdisho. Wafdiga uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Shaakir ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Dhuusa-mareeb, waxaana soo dhaweyntiisa ka qeyb galay Mas’uuliyiin ka tirsan …
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Maanta ka Qaybgalay Tukashada Salaadii Roobdoonka (SAWIRRO)
March 14, 2017 – Ra’iisul Wasaaraha dowladda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Xassan Cali Kheyre iyo madax kale ayaa maanta ka qaybgalay isu-soobax roobdoon oo uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo kaasi oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa Salaad Roobdoon ku tukaday masjidka weyn …
Burcad Badeed Soomaali ah oo Markab Weyn ka soo Afduubtay Badweynta Hindiya (Dhagayso)
March 14, 2017 – Madaxda maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya inay weli wadaan qiimaynta xaladda dhalisay afduubka markabkan iyo wararka la xariira. Qaar kamid ah saraakiishan ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku lug-leeyihiin howlgalka afduubka markabkan. Waxaa xusid mudan in Howl-galada burcad badeedka ee afduubka maraakiibta ee xeebaha Soomaaliya ayaa ahaayeen kuwa …